UDkt Nikki Allorto, ukunguyena owagqugquzela ukuqala kwendawo yabashile esibhedlela sase-Edendale nesikhwama iBurn Care Trust, uthe: ‘Ukuphathwa kwabantu abashile ibingabekwa phambili isikhathi eside.
‘Injongo yethu ukuthi sithuthukise ucwaningo kulo mkhakha, nokuzokwenza odokotela bawujabulele umsebenzi wabo.
‘Sizoyithuthukisa imiphumela yeziguli ezishile kusona sonke isifundazwe saseNingizimu Afrika. Ukusebenza ndawonye kwezifundazwe kuzokwenza ukuthi sikhiqize odokotela abazoba nogqozi lokusebenza kulo mkhakha,’ kusho u-Allorto
Izithameli ezintathu kulomhlangano zenza izifundo zePhD ekulapheni abantu abashile.
Uma ufuna ukuthola ulwazi, thintana no-Aldous ku-aldousc@ukzn.ac.za